Archive du 20170722
Faha-15 taonan’ny TIM Eny Mahamasina ny 29 jolay
Nanao fanambarana teny Tsimbazaza ny Birao politikan’ny Antoko Tiako I Madagasikara omaly, ka nivoitra tamin’izany ny fampitam-baovao fa nandresy sy nahazo rariny tany amin'ny Filan-kevi-pankajana (Conseil d'Etat)
Atallah Béatrice Hatosika ho praiminisitra ?
Nangingina ny resaka fanovana governemanta tato ho ato. Mifamahofaho tanteraka ny vaovao ary efa nandeha hatry ny ela ny resaka fa tsy maintsy halana ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Hery Rajaonarimampianina Nihaona tamin’ny filoha Ivoarianina
Ny alakamisy lasa teo no efa nigadona tany Côte d’Ivoire ny Filoham-pirenena Malagasy noho ny fanatanterahana ny Lalaon’ny Frankofonia andiany faha-8
Fivoahan’ny vola vaovao Afa-baraka tanteraka ny HVM
Zary resa-be eny anivon’ny fiarahamonina sy any anaty tambajotra sosialy ny namoahan’ny fanjakana ireo vola taratasy amin’ny endriny vaovao.
Vovonana mampiray Hisoroka ady an-trano
Efa nilaza izahay fa tsy hiteny raha tsy efa manan-katolotra ny vahoaka Malagasy, hoy ny filohan’ny Vovonana mampiray, Arlette Ramaroson, omaly, tetsy amin’ny Arrupe Faravohitra.
CUA sy ny Maorisianina Hiara-kiasa akaiky
Nihaona mivantana tamin’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely omaly zoma maraina Atoa Soodesh Callichum, minisitry ny Indostria sy ny fampitaovana avy atsy amin’ny Nosy rahavavy Maorisy.
Mandeha ny fotoana
Tsy vao izahay no nilaza fa latsaka an-katerena ny firenena, hoy ny vovonana iray, izay nilaza ny fahitany ny toe-draharaha ankehitriny omaly.
Foara iraisam-pirenena momba ny fambolena sy fiompiana Atao ny 14 ka hatramin’ny 17 septambra
Sambany no hotanterahina eto amintsika ilay foara iraisam-pirenena momba ny fiompiana sy ny fambolena, karakarain’ny agence de communication la premiere ligne. Ny 14 hatramin’ny 17 Septambra ho avy izao no hotontosaina eny amin’ny Forello Expo Tanjombato izany, handraisan’ireo trano eva an-jatony anjara.
Salon de l’entrepreunariat et de l’emploi Manolotra vahaolana ho an’ireo tanora tsy an’asa
Mbola betsaka amin’ireo tanora Malagasy eto amintsika ankehitriny no tsy an’asa na koa manao asa tsy mifanaraka amin’ny fari-pahaizany. Anisan’ny antom-pisian’ny “Salon de l’entrepreunariat et de l’emploi”
Mpitandro ny filaminana Malagasy Natao handrava grevy fotsiny ve sisa ?
Tsy sanatria hanao fitsikerana be fahatany fa tsikaritra ho modraka sy tsy mahita atokona manoloana ny tsy fandriampahalemana eto amin’ny firenena ny mpitandro filaminana, fa manana ny hery tsy hay tohaina kosa amin’ny endrika famoretam-bahoaka sy amin’ny zavatra tsy dia laharam-pahamehana loatra.
Fikatonan’ny karieran’i Ranomena Ahiana tsy hampandry fahalemana
Milefitra amin’ny fitondram-panjakana ireo mponina ao Ranomena na dia eo aza ny fanahian’izy ireo amin’ny mety ho fanakatonana ny ny kariera fitrandrahana kraoma ao an-toerana.